Ra Mika – Ny tantara sy ny tsara ho fantatra
Ny tantara sy ny tsara ho fantatra
Ireo « semizy mainty » tany Italia
Kilasy faha folo(10) ny tenako tamin’izay(3em ). Tsy dia fantratro mazava tsara ny nifandraisan’ny Fasista sy ny semizy mainty fa nolazaina fotsiny tamin’izay hoe « il es partisan de la chemise noir » rehefa nanao ny biographie an’i Mussolini.
Ny loko mainty dia manambara fahafatesana, na dia anisan’ireo firenena niaraka t@ireo mpandresy t@Ady Lehibe I (1919_1918) aza i Italie dia tsy mba nomena zanatany t@ireo firenena resy. Mafy ny vokatrin’ny ady, narefo ny toekarena, niraviravy tanana ny Governemanta. Ny fanaovana anio semizy mainty io no nentina nanambaran’ireo fasista ny fahosan’ny fitondrapanjakana izay tsy nahavaha ny olana. Noho izany dia mila olom_baovao ny Italianina mba hampody @ laoniny indray ny firenena.
Nizarazara maro ny fisista talohan’ny namondronan’ i Mussolini azy ny taona 1919. Izy izay Sosialista taloha fa nialany rehefa nieritreritra izy fa tsy afaka ny hitondra revolisiona ny sosialista. Ny fasista sy ny sosialista anefa dia mifanipaka antsimo sy avaratra ny fotokevitra.
Tia herisetra ny fasista, matetika izy ireo no mandrava ny fihetsiketsehan’ireo sosialista. Fandrahona, fotorahana baomba @ireo vondrona izay tsy mitovy hevitra aminy, izany no nahafantarana ny fasista; amin’izy ireo, amin’ny alalan’ny fampiasankery ihany no fomba ahazoany ny fitondrana.
Izany hoe » Faisceau Italien de Combat » no anaran’ny atoko fa ny « semizy mainty » no marika namantarana an’izy ireo.
Izy ireo no nahafahan’i Benito Mussolini nahazo ny fitondrana taorian’ ny Diabe tao Roma ny taona 1922 ka nanendren’i mpanjaka Victor Emanuel III azy ho Praiministra.
[Sary: Mussolini ( faha 2 @ sisiny ankavia ) miaraka @ireo semizy mainty namany].
Publié parmickaeldjo 11 novembre 2021 Publié dansItalia, Mussolini, TantaraLaisser un commentaire sur Ireo « semizy mainty » tany Italia
Naomi Osaka, Nanova ny fijerin’ireo Japoney ?
ITsy dia mahazatra ny mponina Japoney ny mahita olona tsy mitovy aminy. Kolotsaina iray fa tsy maro toy ny antsika Malagasy ny azy.
Naomi Osaka teraka ny taona 1997 tany Osaka Japon, Haïtsianina ny rainy ary Japoney ny reniny. Fony izy telo taona (3), nifindra tany amerika ry zareo noho ny tsy faneken’ny ray aman_drenin’ny reniny ny fanambadian’ny rainy sy ny reniny.
Mbola kely izy dia efa nampianarin’ny rainy tennis tany etazonia ary nihanivoatra hatrany izany, ny faha roapolo (20) taonany, azony ny fifaninana tennis lehibe US OPEN. Atleta vehivavy lafo karama indrindra hatramizay izy.
Mpitolona ho an’ny zon’ireo mainty hoditra ny tenany ary nandritran’ny fifanina Us Open dia hita nanao arovava orona misy anaran’ireo mainty hoditra nisy namono izy,izay miova isan’andro.
Nanapakevitra haka zom_pirenena Japoney ho azy ny rainy ny taona lasa teo mba hahafan’i Naomi hisolo tena an’i Japon @fifaninana Olympika.
Ny 23 Jolay teo, izy no nandrehitra ilay vazy misy ny afo olympika nandritran’ny fanokana ny lalao olympika tao Tokyo renivohitr’i Japon.
Nanome lesona ho an’ireo mponina Japoney Naomi Osaka satria nasehony fa tokony hisokatra ho @ fahasamihafana @zay i Japon
Publié parmickaeldjo 11 novembre 2021 11 novembre 2021 Publié dansHaity, japana, naomi osaka, tenisyLaisser un commentaire sur Naomi Osaka, Nanova ny fijerin’ireo Japoney ?
Ny ady ho fahaleovantenan’i Bangladesh.
Taorian’ny fialan’ny ireo Britanika mpanjanan_tany tamin’ny taona 1947 dia nozaraina ho roa ny Firaisambe Indianina ka nisy ny Repoblika Indianina ary nisy koa Repoblika Pakistaney. Samy fanjakana iray ihany fa nosarahin’ny elanelana: Pakistan Andrefana, misy an’i Pakistan ankehitriny; Pakistan Antsinana,misy a n’i Bangladesh amin’izao ankehitriny izao. Ireo no nandrafitra ny Repoblika Pakistaney.
Nahatsiro lavitra ny fitondrampanjakana faobe ny taty Antsinana, nisy koa ny fiangarana rehefa handray manamboninahitrin’ny tafika satria vitsy dia vitsy ny isan’ireo Pakistaney avy aty Antsinana no lasa manamboninahitra.
Nanampy trotraka izany ny fandalovan’ilay rivodoza Bhola (1970) nandravarava ny morotsirak’i Bangladesh. Tara ny fandraisana andraikitra nataon’ny fitondrana foibe,izay tany Andrefana, ka nahatezitra ny vahoaka Pakistaney taty antsinana izany.
Ny taona iny ihany, nahazo ny maro anisa tao amin’ny antenimieram_pirenana ny Antoko Ligue Awami,notarihin’ingahy Majibur Rahman taorin’ny fifidiana. Tokony ho izy noho izany no ho Praiministra. Tsy navela handray io asany io nefa izy ary nosamborina ka nampitroatra ireo Bangali (fiantsona ireo mponin’i Bangladesh) izany.
Nanomboka teo ny ady ho fahaleovantenan’i Bangladesh, nisy ny fioko toana nataon’ireo Mukti Bahini (vondrona miaramila sy sivily nanohitra ny fahefana foibe). Nanomboka ny « operation searchlight » ny filoha Yahya Khan ka nandefa tafika tany Bangladesh, mafy ny fanoherana natao an’ireo mpioko.
Niditra nanampy an’ireo Bangali ny tafika Indianina, ary ny fidiran’ny tafika indianina io no nisian’ny ady faha telo (3) teo amin’i India sy Pakistan. Naharitra sivy (9) volana ny ady.
Nandresy ny tafika avy tany Pakistan ihany anefa ireo Mukti Bahini nampian’ny tafika indianina ary azo ny fahaleovantenan’i Bangladesh ny 16 Desambra 1971. Ary lasa Praiministra voalohany Atoa Sheikh Majibur Rahman.
Ramatoa Sheikh Hasina zanak’i Sheikh Majibur Rahman moa no Praiministra any Bangladesh amin’izao fotoana izao
[Sary: maintso, Pakistan Andrefana/Antsinana]
Publié parmickaeldjo 8 novembre 2021 8 novembre 2021 Publié dansBangladesh, India, jeopolitika, Pakistan, TantaraLaisser un commentaire sur Ny ady ho fahaleovantenan’i Bangladesh.
Ra Mika, Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.